Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Canada Travel News » Miakatra hatrany ny fanangonana hotely miakatra
Miakatra hatrany ny fanangonana hotely miakatra
Enga anie 8, 2017
Miakatra Hotel Collection, fanangonana marika malefaka voalohany, mitohy mitombo ny portfolio misy fananana enina miditra amin'ny fanangonana ao anatin'ny iray volana. Anisan'ny Choice Hotels International, iray amin'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza indrindra eto an-tany, ny Ascend Hotel Collection dia misy hotely sy trano fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa, Boutique ary manan-tantara. Misy trano misokatra sy eo an-dalam-pandrosoana miakatra 230 manerantany, ao anatin'izany i Etazonia, Frantsa, fanjakana mitambatra, Norvezy, Soeda, vorontsiloza, Aostralia, Kanada, ary ny Karaiba faritra, misy vohana vaovao andrasana isam-bolana mandritra ny 2017.
"Ny Ascend Hotel Collection dia manome hotely tsy miankina mahaleo tena miaraka amin'ny safidy isan-karazany na mitady fananganana vaovao, fanovana, tetikasan-tserasera adaptive vaovao na hampitomboana ny marika mini-dry zareo", hoy i Mark Shalala, filoha lefitra, fampandrosoana, marika ambony, Hotels Hotels. "Ireo fananana enina vaovao ireo dia vao fanombohana ny fisokafan-drafitra 44 amin'ity taona ity izay maneho fifanarahana 80 izay vita sonia tao anatin'ny roa taona lasa."
Ireo fananana enina izay nosokafana tamin'ny volana aprily dia hita manerana ny faritra amin'ny faritra lehibe, ao anatin'izany:
Ilay LOHATOKY Mena VOAZANA (Brooklyn, New York) - Miorina tsara ao am-pon'ny Brooklyn, ny hotely LOOK Red Hook 79 efitrano dia misy aingam-panahy avy amina endrika Red Hook's indostrialy an-dranomasina miaraka amin'ny sary eo an-toerana sy vina-drindrina fanontana mermaid ary feno fitaovana maoderina manerana ny hotely.
enVision Hotel Boston-Everett (Everett, Massachusetts) - Miaraka amin'ny manan-tantara maro Boston manintona eo amin'ny halaviran-tongotra, ny enVision Hotel Boston-Everett dia safidy tsara ho an'ireo vahiny mijery mpitsangatsangana raha mbola mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy tsiranoka miorina amin'ny 101-trano feno sary mitafy aingam-panahy avy amin'ny lasa teo an-toerana, anisan'izany ny milina fanjairana taloha sy ny birao vita amin'ny laoniny vatan-dranomandry antitra.
Ny Hotely ao amin'ny Sunland Park Casino (Sunland Park, New Mexico) - Na mitady hanitatra ny fotoanao amin'ny casino ianao na amin'ny hazakazaka, ny Hotely misy efitrano 78 ao Sunland Park Casino dia manome ny mpitsidika fomba fijery hazakazaka sy trano fisakafoanana, fisotroana ary fisakafoanana eo an-toerana hanome anao ny traikefa casino feno.
Ny Hotely Solstice (Erie, PA) - Voalohany amin'ireo trano fandraisam-bahiny maro naorina lavitra be tamin'ny Splash Lagoon Water Park, dia nifidy ny iray amin'ireo valan-javaboary 10 ambony ao amin'ny distrikan'i USA ankehitriny mpamaky, ny Hotel Solstice dia feno fitaovana maoderina sy akaiky ny toeram-pisakafoanana sy ny toerana kanto.
Gold Miners Inn (Grass Valley, Kalifornia) - Ity hotely fivarotana butsy Grass Valley, izay tia biby ity, dia lavitra ny trano fisakafoanana, fivarotana ary efitrano manandrana divay eo an-toerana ary toeram-pitobiana lavorary hijerena ireo tanàna Gold Rush manan-tantara miaraka amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny 80 manara-penitra.
Allentown Park Hotel (Allentown, Pennsylvania) - Miorina tsara eo akaikin'ny valan-javaboary marobe, ny efitrano Allentown Park Hotel misy efitrano 125 dia mety indrindra ho an'ireo mpankafy mitaingina akaikin'ny Davali Park & ​​Wildwater Kingdom, ny Da Vinci Science Center ary ny Allentown Fairgrounds.
"Ny Ascend Hotel Collection dia manome ny mpitsidika anay ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa tadiavin'izy ireo miaraka amin'ny tolotra eo an-toerana, ahafahan'izy ireo mahatsapa tena ho anisan'ny vondrom-piarahamonina," hoy izy Janis Cannon, filoha lefitra zokiny, marika ambony, Hotels Hotels. "Ireo fananana ireo dia manome làlana ho an'ny vahiny hahitana an'izao tontolo izao bebe kokoa, ny fombany."
Ny Ascend Hotel Collection dia portfolio maneran-tany misy hotely sy trano fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa, bizina ary manan-tantara ary ao anatin'ny Choice Hotels International, iray amin'ireo orinasam-pandraisana hotely lehibe manerantany. Fantatra amin'ny maha-marika «marika malefaka» voalohany ny indostrian'ny hotely, manana fananana mihoatra ny 170 misokatra sy miasa manerantany ny Ascend, ao anatin'izany ny Frantsa, ny fanjakana mitambatra, Norvezy, Soeda, vorontsiloza, Aostralia, Kanada, ary ny Karaibafaritra. Ny maha-mpikambana anao miaraka amin'ny Ascend Hotel Collection dia ahafahan'ny fananana miavaka sy mahaleo tena ahazoana toerana manerantany ary mitazona ny hatsarany eo an-toerana.